Whiplash (2014) | MM Movie Store
ကွားဖူးတာလေးတဈခုရှိတယျ…တရုပျကွီးတဈယောကျနဲ့မွနျမာအမြိုးသမီးတဈယောကျနဲ့အိမျထောငျကသြတဲ့….အိမျထောငျရေးကအဆငျပွတေယျဆိုပမေယျ့ တရုတျကွီးက သူ့မိနျးမကိုမကနြေပျတဲ့အခြိနျရှိတယျ….အဲ့ဒါက ဂရိတျဦးဖိုးစိနျကွောငျ့ပဲ…ဦးဖိုးစိနျကွီးလာကတဲ့အခြိနျဆို သူ့မိနျးမက ဘာအလုပျပဲရှိရှိ ဖကျြပွီး သှားကွညျ့တာကိုး..
တရုပျကွီးက တဈခါလညျးမဟုတျ နှဈခါလညျးမဟုတျဆိုတော့ အတျောတငျးသတဲ့…တဈနတေ့ော့ သူ့မိနျးမ ဘာလို့အဲ့လောကျကွညျ့ခငျြရတာလဲဆိုတာသိခငျြတာနဲ့ ဦးဖိုးစိနျကပွတဲ့ပှဲကိုလိုကျကွညျ့သတဲ့..ဦးဖိုးစိနျကွီးက မငျးသမီးတှနေဲ့ကတာကိုး….ဆိုငျးဝိုငျးကလညျးမွိုငျဆိုငျ…ဦးဖိုးစိနျကွီးကလညျး မငျးသမီးတှကွေားမှာ လှပစှာကနသေတဲ့..
တရုတျကွီးအနနေဲ့မွနျမာ့ဆိုငျးဝိုငျးရယျ မငျးသားမငျးသမီးအကရယျကိုသိပျနားမလညျဘူး…ဒါပမေယျ့ ကွညျ့နရေငျး လူကမွူးလာတော့ မနနေိုငျမထိုငျနိုငျထပွောသတဲ့…အမလေး ဦးဖိုးစိနျကွီးနဲ့ကတဲ့မငျးသမီးသာဖွဈလိုကျခငျြသတဲ့…အနုပညာဆိုတာဒါပဲနမေယျ….
ကြှနျတျောဘာလို့ဒါတှပွေောနလေဲဆိုတော့ jazz drummer ကောငျလေးတဈယောကျကိုရိုကျပွထားလို့ပါ..ခငျဗြားတို့တော့မသိဘူး..ကြှနျတျောက jazz အမြိုးအစားနဲ့စိမျးလှနျးလှတယျ…ဒါပမေယျ့ဒီကားထဲမှာတော့ Miles Teller ရဲ့ အမူအရာတှေ ဒရမျတီးတဲ့ပုံတှကွေောငျ့ရယျလား J.K. Simmons ရဲ့အားပါပွငျးထနျလှနျးတဲ့ ဟနျပနျတှကွေောငျ့လား
တီးဝိုငျးတဈခုလုံးရဲ့အသံတှကွေောငျ့လားမသိ jazz ဂီတအမြိုးအစားထဲကိုစီးမြောသှားတယျ..ဒီကားက ကြျောကွားတဲ့ drummer သမားဖွဈအောငျကွိုးစားနတေဲ့ကောငျလေးတဈယောကျအကွောငျးကိုရိုကျပွထားတာပါ ..
ကွားဖူးသလောကျ တူရိယာတှတေီးခတျတဲ့သူတှကေို ရုပျရှငျရိုကျတဲ့နရောမှာ piano သမား ဂဈတာသမားတှကေပွသနာသိပျမရှိဘူးတဲ့…ဘာလို့ဆိုတီးကှကျတှပွေတဲ့နရောမှာ view ကိုအစားထိုးဖို့လှယျကူပါသတဲ့….ဒရမျသမားကွတော့အဲ့ဒီလို view ပွဖို့မလှယျကူပါသတဲ့….
ဒီဇာတျကားရဲ့အဓိကသရုပျဆောငျ Miles Teller ကတော့ ကိုယျတိုငျပဲတီးတာ…သူဟာ ၁၅နှဈသားအရှယျထဲက ဒရမျတီးတယျဆိုပဲ…ပွီးတော့ ဒီကားအတှကျကွိုတငျပွငျဆငျမှုအဖွဈ တဈနကေို့ ၄နာရီလကေ့ငျြ့ပါသတဲ့…..Rating တှမွေငျ့တာကလညျး ဒါ့ကွောငျ့နမေယျ….ကနျြတာကတော့ spoiler ဖွဈသှားမှာစိုးလို့မပွောတော့ပါဘူး…..
ကြားဖူးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်…တရုပ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျသတဲ့….အိမ်ထောင်ရေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမယ့် တရုတ်ကြီးက သူ့မိန်းမကိုမကျေနပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်….အဲ့ဒါက ဂရိတ်ဦးဖိုးစိန်ကြောင့်ပဲ…ဦးဖိုးစိန်ကြီးလာကတဲ့အချိန်ဆို သူ့မိန်းမက ဘာအလုပ်ပဲရှိရှိ ဖျက်ပြီး သွားကြည့်တာကိုး..
တရုပ်ကြီးက တစ်ခါလည်းမဟုတ် နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ အတော်တင်းသတဲ့…တစ်နေ့တော့ သူ့မိန်းမ ဘာလို့အဲ့လောက်ကြည့်ချင်ရတာလဲဆိုတာသိချင်တာနဲ့ ဦးဖိုးစိန်ကပြတဲ့ပွဲကိုလိုက်ကြည့်သတဲ့..ဦးဖိုးစိန်ကြီးက မင်းသမီးတွေနဲ့ကတာကိုး….ဆိုင်းဝိုင်းကလည်းမြိုင်ဆိုင်…ဦးဖိုးစိန်ကြီးကလည်း မင်းသမီးတွေကြားမှာ လှပစွာကနေသတဲ့..
တရုတ်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းရယ် မင်းသားမင်းသမီးအကရယ်ကိုသိပ်နားမလည်ဘူး…ဒါပေမယ့် ကြည့်နေရင်း လူကမြူးလာတော့ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ထပြောသတဲ့…အမလေး ဦးဖိုးစိန်ကြီးနဲ့ကတဲ့မင်းသမီးသာဖြစ်လိုက်ချင်သတဲ့…အနုပညာဆိုတာဒါပဲနေမယ်….
ကျွန်တော်ဘာလို့ဒါတွေပြောနေလဲဆိုတော့ jazz drummer ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုရိုက်ပြထားလို့ပါ..ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူး..ကျွန်တော်က jazz အမျိုးအစားနဲ့စိမ်းလွန်းလှတယ်…ဒါပေမယ့်ဒီကားထဲမှာတော့ Miles Teller ရဲ့ အမူအရာတွေ ဒရမ်တီးတဲ့ပုံတွေကြောင့်ရယ်လား J.K. Simmons ရဲ့အားပါပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ဟန်ပန်တွေကြောင့်လား
တီးဝိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အသံတွေကြောင့်လားမသိ jazz ဂီတအမျိုးအစားထဲကိုစီးမျောသွားတယ်..ဒီကားက ကျော်ကြားတဲ့ drummer သမားဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာပါ ..
ကြားဖူးသလောက် တူရိယာတွေတီးခတ်တဲ့သူတွေကို ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာ piano သမား ဂစ်တာသမားတွေကပြသနာသိပ်မရှိဘူးတဲ့…ဘာလို့ဆိုတီးကွက်တွေပြတဲ့နေရာမှာ view ကိုအစားထိုးဖို့လွယ်ကူပါသတဲ့….ဒရမ်သမားကြတော့အဲ့ဒီလို view ပြဖို့မလွယ်ကူပါသတဲ့….
ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင် Miles Teller ကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲတီးတာ…သူဟာ ၁၅နှစ်သားအရွယ်ထဲက ဒရမ်တီးတယ်ဆိုပဲ…ပြီးတော့ ဒီကားအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် တစ်နေ့ကို ၄နာရီလေ့ကျင့်ပါသတဲ့…..Rating တွေမြင့်တာကလည်း ဒါ့ကြောင့်နေမယ်….ကျန်တာကတော့ spoiler ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့မပြောတော့ပါဘူး…..